3 Hoteel cusub oo laga dhisayo gegada diyaaradaha ee Istanbul - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHoteel cusub oo loo yaqaan '3 Hotel' oo laga dhisi doono gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul
27 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
huteel cusub oo laga dhisi doono garoonka diyaaradaha ee istanbul
Codsi EIA ayaa loo sameeyay hudheelka inuu ku yaallo Magaalada City Airport oo laga dhisi doono garoonka diyaaradaha ee Istanbul oo laga hirgaliyay Arnavutköy. Kumanaan kun oo 750 ah ayaa maamuli doona 25 sanadka oo dhan IGA.
Gegada diyaaradaha ee loo yaqaan "IGA Airport" waxay dhisi doontaa seddex hoteel oo leh maalgalin 25 milyan oo ginni ah oo dhulka ku saabsan oo laga kireeyay 255 garoonka diyaaradaha Istanbul.
IGA waxaa la aasaasay Oktoobar 25 by Kalyon - Cengiz - Mapa - Limak Joint Venture Group si ay u dhisto gegida diyaaradaha ee Istanbul oo ay uga hawl gasho 7 sanadka oo dhan.
Sida ku xusan faylka lagu soo bandhigo ee "IGA", kaasoo dalbaday Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta ee Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA), mashruuca hoteelka ee la qorsheeyay in laga dhiso gudaha mashruuca garoonka diyaaradaha ee Istanbul waxaa loo qorsheeyay in loogu adeego qaabayn kala duwan.
Isugeynta aagga Madaarka Magaalada ee loo yaqaan 'IGA Airport City Hotel' ayaa loo qorsheeyay inuu noqdo 39 kun oo 569 mitir oo laba jibaaran. Sidaas awgeed,
3 Star Hotel; 5 waxaa ku jiri doona qolalka 506, maqaayadaha, maqaayadaha kafeega iyo qolalka kulanka oo ku yaal aag ah hal kun oo mitir oo laba jibaaran 631. Dharka dharka hudheelka 3 iyo adeegyada baarkinka waxaa lala wadaagi doonaa hudheelka xiddig ee 4.
4 Star Hotel; 4 waxaa ku jiri doona qolalka 506, makhaayadda labaad, aagagga jimicsiga-jimicsiga, marka lagu daro adeegyada hoteelka xiddigta 564 ee ku yaal aag kun oo mitir oo laba jibaaran 3. Goobta waxaa ku yaal barkad dabaal oo gudaha ah.
Hoteelka 5 Star iyo ballroom; Qolka 5 oo ku yaal 214 kun 555 mitir murabac, 4 kun 4 mitir laba jibaaran oo laba jibbaaran ayaa lagu dulsaari doonaa 394 kun oo mitir laba jibaaran 1500 marka lagu daro adeegyada hoteelka Xiddigaha 3. Waxaa sidoo kale jiri doona adeegyo dhar-dhaqid iyo nadiifin qallalan oo ka madax bannaan hoteelka xiddigaha 4 iyo XNUMX.
Hotelka 'IGA Airport City Hotel' wuxuu lahaan doonaa kun qol 750 oo leh cabbir iyo awoodo kala duwan.
Dhismuhu wuxuu u qorsheysan yahay inuu qaato qiyaastii 30 bilood waxaana qiimaha maalgashiga lagu qiyaasay inuu yahay 255 milyan oo rodol.
Hoteelka Magaalada ee loo yaqaan "IGA Airport City Hotel" waxaa maamuli doona hay'adda 'IGA' muddo hal sano ah sida ku xusan heshiiska ugu weyn ee ay la saxeexatay Maamulka Madaarada Gobolka. 25 waxay lahaan doontaa hawl wade cusub iyadoo loo eegayo shuruudaha maalinta ka dambeysa sanadka ama haddii heshiiska la gaaro, waxaa lagu sii wadi doonaa isla hawl wadeenkaas. (Sözcü)
Khadka tareenka cusub ee la dhiso ee Uzbekistan
Line Railway la dhisi u dhaxaysa Turkey la Nakhichevan
Laba Xarumood Oo La Dhisayo Oo Lagu Dhisi Doono Bursa
Channel si loo dhiso saldhigga Istanbul Logistics Base
Khadadka Tareenka Tareenka si loo dhiso
Waddada cusub ee silsiladaha hoteelada shisheeye waa 3. garoonka
3 oo ka socda YOTEL British. Hudheelka garoonka oo leh qolalka 451
Dukumiinti cusub ayaa lagu dhisi doonaa Garoonka Saddexaad
Hudheel cusub oo ku yaalla goobaha lagu ciyaaro ee Ilgaz
Xiriirimaha Nidaamka Tareenka ee Diyaaradaha 3-aad ee Magaalada Istanbul Istanbul qandaraas hordhac ah…
3.Havalimanı-Gayrettepe Metro Shenbay-Kolin Iskaashatada Dhisidda
XSOX leh SATSO. Dhamaystiridda Road Dublex cusub oo la dhisay oo ka dhexeeya OSB
Turkey, 10 749 sano ahaayeen: Dhismaha Km New Highway
Sabiha Gökçen Mashruuca Iskuxirka Nidaamka Raadinta Nidaamka Hawada Garoomada Dhismaha iyo koronto-dhaliyeyaasha…
Shirkadda ku guulaysatay qandaraaska mashruuca isku-xirka Nidaamka Diyaaradda Sabiha Gökçen…
Dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Gegada Diyaaradaha Istanbul ilaa 3 Yeni Otel
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul
Maamulka Madaarada Gobolka
Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo